[Review] Top 6 máy pha sữa nào tốt an toàn tiện lợi nhất | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: [Review] Top 6 máy pha sữa nào tốt an toàn tiện lợi nhất | Muasalebang in Muasalebang
Ikhaya » Umama nengane » [Review] Imishini yobisi engu-6 ephezulu emihle, ephephile, futhi elula kakhulu
Eminyakeni yakamuva, umenzi wobisi ziya ngokuya zithandwa omama abancelisayo ngenxa yobulula balo mshini. Kodwa-ke, kusenabazali abaningi abangayiqondi ngokugcwele le futha yebele elula, futhi abazi ukuthi iyiphi imodeli okufanele bazikhethele yona. Ake sibhekisele esihlokweni mayelana nezikhiqizo zobisi ezi-6 eziphezulu ezizenzakalelayo ngezansi ukuze uthole ukukhetha okungcono kakhulu kwengane yakho.
1 Yini umenzi wobisi ozenzakalelayo?
2 Ingabe kufanele ngisebenzise umenzi wobisi?
3 Indlela yokukhetha umenzi wobisi ofanele
3.1 Khetha ukuthenga imishini ezinkampanini ezinedumela elihle
3.2 Naka impahla yomshini
3.3 Naka ukuthi umshini usebenza kanjani
3.4 Iwaranti yomenzi wobisi
4 Imishini engu-6 ehamba phambili yobisi namuhla
4.1 1. I-Baby Brezza Formula Pro Ithuthukile
4.2 2. Umenzi wobisi lwejuba
4.3 3. I-Haier HBM-F25 .umakhi wobisi
4.4 4. I-Imami
4.5 5. I-Tiny Baby Formula ehlakaniphile yokwenza ubisi
4.6 6. I-Baby Brezza Formula Pro Ithuthukile
Yini umenzi wobisi ozenzakalelayo?
Umenzi wobisi uwumshini ozenzakalelayo ongalungisa ngokuzenzakalelayo izici eziningi ezahlukene ngesikhathi esisodwa njengenani lamanzi, inani lempusha yobisi, izinga lokushisa, njll. Ukwakheka komenzi wobisi kulula kakhulu futhi kulula, kufaka phakathi lokhu okulandelayo:
Ibhodlela lokwenza ubisi
I-heater yamanzi kanye ne-sterilizer
Umgodi wokubamba ubisi oluphumayo
Ingabe kufanele ngisebenzise umenzi wobisi?
Ingabe kufanele ngisebenzise umenzi wobisi? Lona umbuzo abantu abaningi abazibuza futhi abawubuza kakhulu namuhla. Uma usebenzisa umenzi wobisi Le ngane izoletha izinzuzo ezivelele ngale ndlela elandelayo:
Ukusekela ukwenza ifomula yengane kuyashesha futhi kulula ngenkinobho eyodwa nje. Ngaleyo ndlela kusiza abazali babe nesikhathi esengeziwe sokukhuluma nokudlala nezingane zabo.
Ubisi luxubene nesilinganiso esiqondile sempushana engu-100% emanzini ngefomula efudumele enefomula ephelele. Ngaleyo ndlela kusiza ingane ukuba imunce ngokugcwele zonke izakhamzimba ezisebisini.
Umshini ufakwe isici sokufudumala kwebhodlela, ngakho-ke asikho isidingo sokuchitha isikhathi esiningi sokufudumala ubisi endishini yamanzi ashisayo noma iketela.
Umkhiqizo usethelwe emazingeni okushisa ahlukene kanye namandla, ngakho-ke kungenzeka ukuxuba ubisi lwezingane nezinhlobo ezahlukene zobisi namabhodlela ahlukene.
Indlela yokukhetha umenzi wobisi ofanele
Ukukhetha umkhiqizo omuhle womshini wokusenga, ofanele izidingo zakho, udinga ukusekelwa ngale mibandela elandelayo:
Khetha ukuthenga imishini ezinkampanini ezinedumela elihle
Umkhiqizo uthathwa njengento yokuqala wonke amakhasimende ayicabangelayo lapho ekhetha ukuthenga noma yimuphi umkhiqizo. Ngoba umenzi wobisi Okufanayo kuya ngemishini ezenzakalelayo, kufanele ukhethe ukuthenga umshini owenziwe ngemikhiqizo ehloniphekile, ukuze uqinisekise ukuphepha komshini ngenkathi usebenzisa.
Naka impahla yomshini
Ngenxa yokuthi umenzi wobisi ungowokuphuza ngokuqondile, impahla yomshini ibaluleke kakhulu futhi kufanele iphephe ngokuphelele. Kufanele ukhethe imikhiqizo eyenza ubisi eyenziwe ngezinto ezingenazo i-PBA.
Naka ukuthi umshini usebenza kanjani
Njengamanje, izinhlobo zemishini yobisi zihlukile ngohlobo nesakhiwo, ngakho-ke lapho ukhetha ukuthenga umshini wobisi, kufanele unake ukuthi umshini usebenza kanjani. Kufanele unikeze okuncamelayo ukuthenga imishini esebenza ngokuthula, kulula ukuyisebenzisa ukwenza kube lula ukuba ingane yakho yenze ubisi.
Iwaranti yomenzi wobisi
Kufanele uthenge imishini yobisi ezenzakalelayo ezinkampanini ezinewaranti enhle neyesikhathi eside. Njengoba umenzi wobisi esekelwe ku-electronic, uma kukhona okungahambi kahle, iwaranti ibaluleke kakhulu.
Imishini engu-6 ehamba phambili yobisi namuhla
Emakethe namuhla, kunemikhiqizo eminingi ehlukahlukene yomshini wobisi othomathikhi, ehlukahlukene ngomkhiqizo, ukwakheka kanye nezici ezihlukile. Ingabe lokhu kukwenza uzibuze ukuthi yimuphi umkhiqizo omuhle? Ungakhathazeki, Izibuyekezo ze-Phong zizofaka ohlwini lwemishini yobisi e-othomathikhi ehamba phambili engu-6 namuhla njengereferensi yakho:
1. I-Baby Brezza Formula Pro Ithuthukile
I-Baby Brezza iwuphawu oludumile e-US, olugxile emikhiqizweni yomama nezingane, ikakhulukazi, i-Formula Pro Advanced milk dispenser ekhiqizwe ngu-Baby Brezza ithole uthando nokubonga kumakhasimende emhlabeni jikelele.
I-Baby Brezza Formula Pro Advanced ifakwe ubuchwepheshe obuphambili bokuhlanganisa ubisi obuthuthukiswe futhi bugunyazwe i-Baby Brezza Enterprises LLC yase-US. Imikhiqizo iqinisekisiwe ukuthi ihlangabezana nezindinganiso zamazwe ngamazwe futhi manje isikhona emazweni angaphezu kuka-50 emhlabeni jikelele njengalawa: I-USA, Canada, amazwe ase-Asia, amazwe ase-Europe, amazwe aseMpumalanga Ephakathi naseNingizimu Afrika, Amazwe Amaphakathi naseNingizimu Melika…
Umenzi wobisi weBaby Brezza’s Formula Pro Advanced
Izinzuzo ezivelele zomenzi wobisi we-Baby Brezza Formula Pro Okuthuthukisiwe:
Idizayini eqinile nethambile: Lo mshini usebenzisa izinto ezisezingeni eliphezulu, awuqukethe i-BPA, i-Phthalate futhi uklanywe ngendawo ehlukile equkethe amagremu angama-700 wempushana yobisi evalwe ngokuqinile ukuze kuqinisekiswe ukuthi akukho ukuvuza komoya. Umshini unesisindo esingu-3.8kg kuphela, esilungele ukuhambahamba endlini.
Ubuchwepheshe bokuxuba obunelungelo lobunikazi: Umenzi wobisi we-Baby Brezza Formula Pro Advanced usebenzisa ubuchwepheshe bokuxuba ubisi obunelungelo lobunikazi obuqinisekisa ukulinganisa okuphelele nokungaguquguquki, ukukhishwa, nokuxutshwa kwamanzi nefomula.
Kulula ukuyisebenzisa: Wonke amamodi aboniswa esikrinini se-LCD. Ngakho-ke, abasebenzisi badinga kuphela ukufaka, khetha izinga lobisi abafuna ukulixuba bese ucindezela okuthi Qala ukuze babe nenkomishi yobisi yengane yabo ngokushesha. Ngaphezu kwalokho, umshini uphinde uhlanganise umsebenzi wokukhumbula izinga lokushisa kanye nezinga lobisi ekuphuzeni kwangaphambilini, ukusiza omama ukuthi basindise isikhathi esiningi esikhathini esizayo.
Awekho amabhamuza omoya: Umenzi wobisi we-Baby Brezza Formula Pro Othuthukisiwe angaxuba futhi agcine ubisi lufudumele ezingeni lokushisa elijwayelekile ngaphandle kokunqwabelana noma amabhamuza omoya ngenxa yobuchwepheshe bawo bokuhlanganisa obuhlukile.
Amazinga ahlukahlukene okuxuba ubisi: I-Baby Brezza Formula Pro Advanced ingaxutshwa namazinga okushisa angu-3 angu-30°C, 37°C, 41~43°C futhi ingaxuba ubisi lwempushana yemikhiqizo yefomula edume kakhulu emhlabeni. .
Ukusebenzisa i-voltage engu-220V: I-Baby Brezza Formula Pro Advanced isebenzisa amandla kagesi angu-220-240V, 50/60Hz, ngakho omama badinga nje ukuyixhuma ngokuqondile ukuze balungele ukukhiqiza ukudla kwezingane.
Amazinga obisi angaxutshwa: Umshini ungaxuba ubisi ngamakhono ahlukene ukuze ufeze izidingo zezingane, okuhlanganisa: 60ml, 90ml, 120ml, 150ml, 180ml, 210ml, 240ml, 270ml, 300ml.
2. Umenzi wobisi lwejuba
Umenzi wobisi I-Pigeon ingumugqa womkhiqizo wemishini yokusenga ezenzakalelayo ethandwa ngabasebenzisi abaningi namuhla. Lo mshini unomzimba owenziwe ngepulasitiki yekhwalithi ephezulu, enethangi lamanzi lepulasitiki. Kodwa-ke, uma usebenzisa lo mkhiqizo ukuxuba ubisi, akukho phunga lapho ushiswa ekushiseni okuphezulu.
Ngaphezu kwalokho, cishe emizuzwini emi-3 lo mshini wePigeon ungabilisa kalula u-200ml wamanzi isikhathi esisodwa sokusenga. Ingxenye yethangi lamanzi ifakwe umsebenzi wamanzi abilayo futhi igcina amanzi efudumele aze afike ku-70 degrees. Ngakho-ke, abasebenzisi bangenza ubisi ngokuzayo ngaphandle kokuthi babilise amanzi futhi. Ngakho-ke, lo mkhiqizo ulula kakhulu futhi uyashesha lapho wenza ubisi izikhathi eziningi noma wenza ubisi ebusuku.
Intengo yesithenjwa: 1,600,000 VND/umshini
3. I-Haier HBM-F25 .umakhi wobisi
I-Haier HBM-F25 iwumshini ozenzakalelayo wokukhipha ubisi ngomklamo ohlangene, omuhle, igazi lenziwe ngokuphelele ngensimbi engagqwali, elinikeza ukuqina nokuphepha kwempilo yengane kukho konke ukuphila komshini.
Isivalo somshini siklanywe ngobuhlakani ngezinto ezivimbela ukushisa. Kanye nomshini unamandla okunqamula amandla ngokuzenzakalelayo lapho ithangi lamanzi obisi lingenalutho. Lokhu kukunikeza ukuphepha okuphelele ngenkathi umshini wenza ubisi. Ngaphandle kwalokho, lo mkhiqizo we-bew milk maker nawo uhlanganiswe nezici eziningi ezivelele ukwenza omama abadla ubisi lwebhodlela kube lula futhi kube lula.
Isici esikhethekile kakhulu esingasisho ukuthi umshini uhlanganiswe nemodi yokuhlunga i-chlorine ezenzakalelayo. Umshini ungakwazi ukuhlanza ngokuzenzakalelayo indawo yomshini ngemva kokwenza ubisi ngaphandle kokuchitha isikhathi esiningi nomzamo womsebenzisi. Lesi futhi isizathu sokuthi kungani umkhiqizo udumile futhi wethenjwa esikhathini sanamuhla.
Intengo yesithenjwa: 2,380,000 VND/umshini
Umenzi wobisi U-Imami unokubukeka okuqinile, okuhle, okuqukethe amathoni amahle ampunga-amhlophe. Lo mshini wokusenga ungahlangabezana nezidingo eziphelele zokukhiqiza ubisi ukusuka kumasekhondi ayi-8 kuye kwangama-20 kuphela. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yesilawuli esiklanywe ngezinzwa ezihlakaniphile, ungakwazi ukugada kalula futhi ulungise imodi yokusenga ngendlela othanda ngayo ukusuka ku-40 ukuya ku-60 degrees Celsius.
Iphiko elingakwesokudla lomshini yisitsha samanzi sokwenza ubisi, phezulu yingxenye yokuvala inzalo ye-UV. Ngalo msebenzi wesimanje, ungakwazi ukupha ingane yakho ubisi ngokunethezeka ngoba iqinisekisa amanzi ahlanzekile naphephile. Olunye uhlangothi lusetshenziselwa ukufudumala amabhodlela ezingane nokudla. Le yunithi ingakwazi ngisho nokubulala amabhodlela ezingane.
Ngokucacile, i-hopper enyakazayo yomenzi wobisi we-Imami inomklamo ohluke kakhulu, ongakha umfudlana we-chary omise okwe-vortex ukuncibilikisa ubisi kalula. Ngakolunye uhlangothi, umenzi wobisi we-Imami uphinde asebenzise ubuchwepheshe be-electro-optical kumthamo we-powder yobisi, okusiza ukukala inani lempushana ngendlela enembe kakhulu futhi esheshayo. Ngesikhathi esifanayo, kusiza impushana yobisi ukuthi igcinwe ivaliwe, ingabi manzi futhi ithinta izinga lobisi.
Intengo yesithenjwa: 5,000,000 VND/umshini
5. I-Tiny Baby Formula ehlakaniphile yokwenza ubisi
I-Tiny Baby Formula iwumugqa wemishini yobisi yekhwalithi ephezulu evela e-Japan. Lo mugqa womkhiqizo wenziwe ngezinto ze-tritan ezingenayo i-BPA futhi ugunyazwe ngokugcwele ngokuvumelana nezindinganiso zamazwe ngamazwe naseYurophu. Ngakho-ke, kuphephile ngokuphelele empilweni futhi ungaqiniseka ukuyisebenzisela ingane yakho.
Le fomula Yezingane Encane kulula ukuyisebenzisa nephaneli yokuthinta futhi ingalungisa inani lamanzi nefomula. Kubandakanya umthamo wamanzi ukusuka ku-30 ​​- 300ml, izinga lokushisa lethangi lamanzi 37°C – 55°C kanye nevolumu yethangi lempushana yobisi engu-550g. Ngaphezu kwalokho, lo mshini unezinhlobonhlobo zezinzwa zokushisa nesisindo zebhodlela ngalinye lobisi elikhishwa ngefomula efanele. Ngesikhathi esifanayo, ubisi alunawo ama-clumps noma izimpushana futhi luncibilika ngo-100% uma luxutshwe.
Intengo yesithenjwa: 3,850,000 VND/umshini
6. I-Baby Brezza Formula Pro Ithuthukile
Igama elilandelayo ohlwini lwemishini yobisi ehamba phambili namuhla i-Baby Brezza Formula Pro Advanced. Umkhiqizo okwamanje waziswa abasebenzisi ngokwekhwalithi enhle kanye nenani elithengekayo.
Umenzi wobisi we-Baby Brezza Formula Pro Advanced wenziwe ngepulasitiki eqinile yekhwalithi ephezulu, ezibophezele ekutheni ingabi ne-BPA, ngakho-ke kuphephe ngokuphelele ukuyisebenzisa isikhathi eside. Nge umenzi wobisi Lokhu kuhlakaniphile, kuzokusiza ukwandise isikhathi osidingayo sokwenza ubisi lwengane yakho.
Ngaphezu kwalokho, ukwenza ubisi ngendlela evamile, kodwa ungaqiniseki ukufeza ukunemba okufanayo neresiphi yomshini. Ngenxa yalokho, uhlale ukulungele ukunikeza ingane yakho ubisi nganoma yisiphi isikhathi ngaphandle kokwesaba indlala. Umkhiqizo unesakhiwo esilula, okuhlanganisa ingxenye engaphezulu iyigumbi elivaliwe ukusiza ukugcina nokugcina impushana. Uhlangothi lomshini ithangi lamanzi elinamageji amanzi atholakalayo, afinyelela ku-1.5 wamalitha amanzi.
Intengo yesithenjwa: 5,390,000 VND/umshini
Ngolwazi olwabiwe ngenhla mayelana nabangu-6 abaphezulu umenzi wobisi Amathemba anamuhla angcono kakhulu okukusiza ukuthi uqonde kangcono le mikhiqizo. Ngesikhathi esifanayo, ukukhetha umkhiqizo ofanelekayo ongawusebenzisa ukwenza ubisi lwengane yakho kuyashesha futhi kulula kakhulu.
Xem Thêm Máy lọc nước Karofi 8 cấp Slim S-s038 | Muasalebang
Điện thoại Vivo V23e | Giá rẻ, khuyến mãi khủng, trả góp 0% | Muasalebang